Mitemo nemigariro -
MIBVUNZO YOSE, MIBVIRIDZO, NEMAGUTO ANOENDA MHURI YANGU YOKUDZIDZWA KWENYIKA YEMWEI WEBSITE INOPA KUCHINJA KUNYANZISO. NOKUDZIDZA KUBVA KUSI SITI YAKO UCHIMBIRIRA MUMWE MASHOKO, MASHOKO, NEMAGWARO.
Nokutsvaga webhusaiti iyi, uri kubvumirana kusungwa neiyo Mitemo uye Zvigadziro zveSaiti yepaIndaneti, mitemo yose inoshanda uye mitemo, uye unobvumirana kuti iwe une dare rekuteerera nemitemo ipi zvayo inoshanda. Kana iwe usingabvumirani nemamwe emashoko aya, unorambidzwa kushandisa kana kuwana peji iyi. Zvimwe zviri muwebhu iyi zvinodzivirirwa nekodzero yekodzero uye yekutengeserana.
2. Kutumira Policy
DOMESTIC SHIPPING (US inorayira chete)
Isu tinotakura mirairo yose kuburikidza neUnited States Postal Service (www.USPS.com)
Nokuti mirairo yose yakaiswa muUnited States ndapota tendera 7-9 bhizimisi mazuva kubva pazuva rokubhadhara iwe iwe kugamuchira yako purogiramu (vhiki nevhiki uye mazororo hauverengi semazuva ebhizinesi). Iyi inongoratidzika chete kubva kune imwe nguva yekutumira nguva uye naizvozvo inogona kunge yakareba kana yakareba kupfuura mazuva 7-9 bhizinesi.
Kutengesa nguva ndeye 5-6 mazuva Kutengeswa kwezuva 2-3 inokwana huwandu hweZ7-9 yemabhizimisi mazuva. Iyi inongorongedzwa chete kubva pamusana wekutumira uye nguva yekugadzirisa uye inogona kunge yakareba kana yakfupi kupfuura mazuva 7-9 anotaurwa.
Kana iwe ukarayira kugadziriswa kana chero yemhando yatinopa iyo ETA ichave yakareba kupfuura yakataurwa.
Afro Kinky achada nguva yakawanda yekuita.
Panguva yezororo uye kutengeswa / kutengeswa kwemazuva kune kazhinji 1-3 yebhizimisi zuva rakagadzirwa mukugadziriswa nekuda kwehuwandu hwemirairo.
Nhamba dzekutevera dzichaendeswa kumirairo yose mushure mekubvumirwa kushandiswa kwenguva.
My Hair Hair Extensions haisi iyo inokonzera chero mapeji akarasikirwa kana kubiwa mubato rekutumira. Hatitengi kubhadhara vatengi kune chero mapeji akange arasikirwa kana kubiwa nekuda kwemamiriro asingatarisirwi ari kunze kweMyendo Yangu Hair Extensions kudzora. Kana iwe uchida kuwedzera inshuwarisi kune yako purazi tapota terefona kana kutitumira email kusati waisa dare rako.
Ndapota ipai urongwa pane imwe nguva ichakupa nguva yakakwana yekugamuchira yako yekutangira vasati vatarirwa vhudzi rako. Nguva yekugadzirisa haigone kuendeswa mberi kana kuratidzwa. Kunyange zvakadaro nguva yekuendesa inogona kuratidzirwa.
SHANDURO DZEMHURI (nyika dzose kunze kweU.S.)
Nokuti mirairo yose inowanikwa mune dzimwe nyika fadza iwe 5-6 mazuva ekugadzirisa uye isu tichatumira nhamba yekufambisa kune yako. Nguva yokutora ichasiyana nechimwe nechimwe nzvimbo.
Mirairo inotumirwa kuburikidza UPS (www.UPS.com) Kutengesa mitengo inopesana nechinzvimbo chimwe nechimwe.
Kutumira kunogona kubva kune 20 $ - $ 65 yemitemo yenyika dzakawanda.
Isu hatisi mhaka yezvimwe mapeji akarasikirwa kana kubiwa mubato rekutakura. Hatitengi kubhadhara vatengi kune chero mapeji akave arasikirwa kana kubiwa nekuda kwezvisingatarisirwi zviri kunze kweMyendo Yangu Hair Extensions Control. Kana iwe uchida kuwedzera inshuwarisi kune yako purazi tapota terefona kana kutitumira email kusati waisa dare rako.
ZVEZVAKAZVAKA ZVOSE ZVINOPEDZA, HERE ZVOKUDZIDZA. ZVINOKUDZIDZA ZVINOKOSHA.
Iwe unogona kubvisa urongwa wako kana waitwa mukati mekutanga 24 hrs. Kuregererwa kunonzi kubhadharwa uye hatingazoremekedzi chero kuregererwa mushure mokunge 24 yemazuva yapfuura. Kubva pakuchenjera kwedu tinogona kubvumira kuchinja kwehutano, kana tikabvumira mutemo kuchinja ikoko kuchave kurongeka kuchinja kusagadzikana kwemari ye $ 15.
Chikumbiro chekushandurudza ZVINOFANIRA kuitika mukati mezuva rekutanga re7 mushure mekunge purogiramu yako yave iri wakaponeswa. Pamamiriro ezvinhu chaiwo anongowanikwa kuMay Natural Hair Extensions anoda kushandurwa kunogona kuitika. Kuti iwe ugochinanidza bvudzi rako rose bvudzi rinofanira kudzorerwa risina kuiswa, risina kuiswa nemataki ose uye zvisimbiso zvakanyatsopinda mukati mekutanga kwemazuva 7 ekuberekwa. Chero kushanduka kupi kuchadzivirira kubvudzira bvudzi. Izvi zvinosanganisira asi hazvirevi kune bvudzi chero ripi zvaro rave ratemwa, rakasvibiswa, rakasanganiswa, uye brushed. Chero bvudzi rakave rakanyoroveswa, rakaiswa, rakasvibiswa kana rakagadziriswa haringashandurwi
Chimwe chikonzero chechikonzero chisingakwanisi kugoverana "Ndichitsvaga chimwe chinhu" kana kuti "izvi hazvisi nguva yakareba sezvandaida" panofanira kunge kune nyaya inokosha nechigadzirwa kana kukanganisa kwakaitwa naMHE. Bvudzi chinhu chinogadzirwa nehutano, kana ikasiya nzvimbo yedu hatingagoni kuigadziridza kana kuitengesa kana yakasvinudzwa nemutengi. Saka kushandurana kwedu uye kubhadharwa kwemitemo kwakasimba.
Kune mari yekudzorera ye $ 20 yezvose zvakabvumirwa kudzoka, kuregererwa, uye kugoverana kunosangana nemashandisirwo edu ekutsinhanisa.
NeMutemo neMirayiro yeMutano kuFlorida My Natural Hair Extensions LLC inosungirwa uye inodiwa kutsigira izvi. Hatingamboiti chero zvisizvo.
Kana tikasarudza kubvumira kushandiswa kwevatengi kunokonzera kubhadhara mari yekudzorera. MHE haazobhadhari kana kubhadhara vatengi kune chero ipi zvayo yakadzorerwa kutumira mari kune dzimwe nyika kana kumusha.
Sezvo nekambani ipi neipi, chero kutengesa kunotengwa pakutengesa, nekodzero yekubvisa, kana zvigadzirwa zvese zvichave zvekutengeswa kwekupedzisira.
Zvinhu zveMyNaturalHairExtensions.com zvinopiwa "sezvazviri". Hatiiti zvivimbiso, zvinotsanangurwa kana kuti zvinorehwa uye zvino zvinorega zvimwe zvose zvakarongedzwa, kusanganisira asi pasina kuvharidzirwa kune zvese zvinoratidzirwa. Uyezve, My Natural Hair Extensions Co. haibvumirani kana kuita chero mumiririro pamusoro pezvakarurama, zvichida zvigumisiro, kana kuvimbika kwekushandisa kwezvinhu paIndaneti yepaIndaneti kana kuti zvimwe zvine chokuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero masayiti akabatanidzwa kune ino.
Zvinhu zvinowanika paMyNaturalHairExtensions.com zvinogona kusanganisira teknolojia, typographical, kana kuti mapikicha mapikicha. Hatitauri kana kureva kuti chero chezvinhu zvepawebhu ino ndezvakarurama, zvakakwana, kana zvino. My Natural Hair Extensions Co. inogona kuchinja kuzvinhu zviri pawebsite ino, kusanganisira mitemo uye mitemo, mutemo wekutumira, mitemo yekudzorera chero nguva pasina chiziviso. Hatiiti, kunyange zvakadaro, tinozvipira kupi nekugadzirisa zvinhu. My Natural Hair Extensions Co. inogona kugadzirisa mazwi aya ekushandisa kwepawebsite yayo chero nguva pasina chiziviso. Nokushandisa iyi web site iwe unobvumirana kusungwa nehuwandu hwemitemo nemigariro yekushandisa.